ဘုရားသခင် အဘယ်သူနည်း (WHO IS GOD?) | Shwe Canaan TV
ဘုရားသခင် အဘယ်သူနည်း (WHO IS GOD?)
10Truth Saturday, 26 January 2013
ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၂) ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှ မမြင်စဖူး ...” ဟု ဖော်ပြထားသည် ဖြစ်ရာ ဘုရားသခင်အကြောင်း သိလို၍ ဘုရားသခင်သည် အဘယ်သူနည်းဟု မ...
ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၂)
ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှ မမြင်စဖူး ...” ဟု ဖော်ပြထားသည် ဖြစ်ရာ ဘုရားသခင်အကြောင်း သိလို၍ ဘုရားသခင်သည် အဘယ်သူနည်းဟု မေးမြန်းလာသူအား လူÓဏ်ကို အားကိုး၍ အဖြေပေးရန် အလွန်ခက်ခဲလှပါသည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာ၌ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း တိတိကျကျ ဖော်ပြအဖြေ ပေးထားသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။
(က) ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းသူဖြစ်သည်
(GOD IS THE CREATOR OF THE UNIVERSE)
“ထာဝရဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၍ ငါတို့၏ အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ငါတို့သည်လည်း ဘုရားသခင်၏ လူဖြစ်ကြ၏”(ဆာလံ၊၁၀ဝး၃)။ “ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား
မိုးကောင်းကင်ကို ငါတစ်ပါးတည်း ကြက်လျက် မြေကြီးကို အဖော်မရှိဘဲ ခင်းလျက် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းသော ထာဝရဘုရားဖြစ်၏” (ဟေရှာ၊ ၄၄း၂၄)။ “ထိုဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာနှင့်တကွ အရပ်ရပ် ရှိသမျှတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏” (ဆာလံ၊ ၁၄၆း၆)။
(ဃ) ဘုရားသခင်သည် မပြောင်းလဲသောအရှင်ဖြစ်သည်(GOD IS THE SAME YESTERDAY, TODAY, TOMORROW)
(ဆာလံ၊ ၁၁၉း၁၃၇။ ၁၂၉း၄။ ၁၄၅း၁၇)။
“ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပေးတော်မူသော ဘုရားဖြစ်၏”
(ယေရ၊ ၃း၅-၆။ ရော၊၃း၂၁-၂)။
“ဖြောင့်မတ်တော်မူသော သခင်ဖြစ်၏” (တမန်၊ ၃း၁၄)။ငါထာဝရဘုရားပေတည်း” (ဟေရှာ၊၄း၄)။
စာေတြ ကူးလို႔မရဘူးဗ် ကူးလို႔ရေအာင္လုပ္ေပးပါလား
Shwe Canaan TV: ဘုရားသခင် အဘယ်သူနည်း (WHO IS GOD?)